INDLELA YOKUPHUMA KU-TWITTER - TWITTER - 2019
Ungangena kanjani ku-akhawunti ye-Twitter
Ukudala noma iyiphi i-akhawunti kwinethiwekhi, kufanele wazi njalo ukuthi ungaphuma kanjani kuwo. Akwenza umehluko ukuthi lokhu kuyadingeka yini ngezizathu zokuphepha noma uma ufisa ukugunyaza enye i-akhawunti. Into esemqoka ukuthi ungashiya i-Twitter kalula futhi ngokushesha.
Sishiya kusuka ku-Twitter kunoma yikuphi amapulatifomu
Inqubo yokugunyazwa kwe-Twitter ku-Twitter ilula futhi iqondile ngangokunokwenzeka. Enye into ukuthi kumadivayisi ahlukene i-algorithm yezenzo kulokhu ingase ihluke kancane. "Phuma ngemvume" kusiphequluli se-Twitter sinikezwa ngenye indlela, futhi, isibonelo, kuhlelo lwe-Windows 10 - luhlukile kancane. Yingakho kufanelekile ukucabangela zonke izinketho eziyinhloko.
I-Twitter Isiphequluli Version
Ukungena ngemvume kwi-akhawunti ye-Twitter kusiphequluli cishe kulula. Noma kunjalo, i-algorithm yezenzo zokungagunyaziwe ku-web version ayibonakali kuwo wonke umuntu.
Ngakho, ukuze "ungene ngemvume" kunguqulo esekelwe kwisiphequluli se-Twitter, into yokuqala okudingeka ukwenze ivule imenyu "Iphrofayela kanye nezilungiselelo". Ukuze wenze lokhu, mane uchofoze ku-avatar yethu eduze kwenkinobho. Tweet.
Okulandelayo, kwimenyu yokudonsela phansi, chofoza entweni "Ukungena ngemvume".
Uma emva kwalokho ushaya ikhasi ngokuqukethwe okulandelayo, futhi ifomu lokungena lisebenza futhi, kusho ukuthi ushiye ngempumelelo i-akhawunti yakho.
Uhlelo lokusebenza le-Twitter lwe-Windows 10
Njengoba uyazi, iklayenti yensizakalo ye-microblogging ethandwa kakhulu nayo ikhona njengensiza yamadivayisi weselula nedeskithophu ku-Windows 10. Ngesikhathi esifanayo, akunandaba ukuthi lolu hlelo lusetshenzisiwe - kwi-smartphone noma kwi-PC - ukulandelana kwezenzo kuyafana.
Okokuqala, chofoza isithonjana esibonisa umuntu.
Kuye ngobukhulu beskrini sedivayisi yakho, lesi sithonjana singase sitholwe kokubili phansi nangaphezulu kwesikhombikubona sohlelo.
Okulandelayo, chofoza isithonjana nabantu ababili eduze kwenkinobho "Izilungiselelo".
Ngemva kwalokho, kwimenyu yokudonsela phansi, khetha into "Ukungena ngemvume".
Khona-ke siqinisekisa ukugunyazwa kwebhokisi ebhokisini lebhokisi le-pop-up.
Futhi yilokho konke! Ukuphuma ngemvume kusuka ku-Twitter kwe-Windows 10 kuqedile ngempumelelo.
Iklayenti yeselula ye-iOS ne-Android
Kodwa kuzinhlelo zokusebenza ze-Android ne-iOS, i-algorithm yokuzigunyaza idinga ngokufanayo. Ngakho-ke, inqubo yokungena ngemvume ku-akhawunti kumaklayenti ephathekayo izocatshangelwa ngesibonelo segajethi elaphethwe yi "Robot Green".
Ngakho, okokuqala sidinga ukuya kwimenyu engasese yohlelo lokusebenza. Ukwenza lokhu, njengokungathi kwenguqulo yesiphequluli sensizakalo, chofoza isithonjana se-akhawunti yethu, noma swayiphela ngakwesokudla ukusuka ekugcineni kwesokunxele kwesikrini.
Kule menyu, sinesithakazelo entweni "Izilungiselelo Nobumfihlo". Hamba lapho.
Bese ulandela isigaba "I-Akhawunti" bese ukhetha into "Ukungena ngemvume".
Futhi futhi sibona ikhasi lokugunyazwa ngokubhaliswa "Siyakwamukela ku-Twitter".
Futhi lokhu kusho ukuthi "siphumelele" ngempumelelo.
Lezi yizinyathelo ezilula odinga ukuzenza ukuze uphume kwi-Twitter kunoma iyiphi idivayisi. Njengoba ubona, akukho lutho oluyinkimbinkimbi ngakho.
https://termotools.com zu.termotools.com © Twitter 2019